भाटे किराँती - परिहास - नेपाल
साँच्चै क्रान्तिकारी कामरेड रहेछन्, गोपाल किराँती । कामरेड केपी ओली र प्रचण्डको ‘ठूला वाम : एक ठाम’लाई महाबली कांग्रेसले चुनौती दिन सकेन, अर्को गठबन्धन बनाउने रुन्चे घोषणामै खुम्चेको छ । बरु पहिलो र ठूलो पार्टीको पिलन्धरे सपनाबाट दुईतिहाइ बहुमतको सरकारमा बढुवा भएका ओली र प्रचण्डलाई उनले ठाडै पार्टी पुनर्गठन, लडाकू दस्तादेखि भाटे कारबाहीसम्मको धम्की दिएको दियै छन् । कहिले राई, कहिले खुम्बु त कहिले किराँती थरमा बदलिरहने गोपालले छापामार स्वभाव देखाएपछि कामरेडहरुको रक्तचाप बढेको बढ्यै छ । उतिबेलाका पक्का पहिचानवादी अनि महामधेसवादी प्रचण्ड नै ‘ओलीवादी’ भएर निस्केपछि उनी के गरुन् ? बरु ‘उत्पात प्रचण्डवादी’ गोपाल अब पदको उधारो मोलमोलाइमा टुंगिएलान् कि साँच्चै ‘भाटे किराँती’ नै बन्लान् ? लाल कुमाल उनको क्रान्तिकारिता नाप्न उत्सुक छ । कमरेडको जो मर्जी ।